Dhaqaalaha - Sabahionline.com
Canshuur laba-dhac ah oo ganacsiga Bariga Afrika ka xadidaya in uu ku fido gobalka
Golaha Ganacsiga Bariga Afrika ayaa waddamada gobolka uga dhex olaleeynaya in ay ixtiraamaan heshiiskii lagu joojiyay canshuurta laba-dhaca ah ee ganacsiga xudduudaha isaga goosha.
Khadka korontada isku xidhaya Kenya iyo Itoobiya oo kordhin doona ganacsiga gobolka
Shaqada ayaa dhawaan ka bilaaban doonta khad koronto oo isku xidhaysa Itoobiya iyo Kenya, taas oo Kenya u saamaxaysa in ay iibsato koronto raqiis ah korna u qaado kalsoonida helitaanka korontada.
Sacuudiga oo Soomaaliya siinaya $24 milyan oo doolar oo gargaar ah
Gargaarka ayaa gacan ka gaysanaya dib u dhiska Soomaaliya, waxa uuna gargaar aadaninimo siinayaa dadka barakacayaasha ah, sida uu sheegay xafiiska Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ee Muqdisho.
Muddo 50 sano ah, shumaca ayaa kusoo wareegayay dalka si loo xuso xoriyadda Tansaaniya, looguna dabaal dago xoriyad, qiimaheeda, ayaa si walba oo ay ahaataba su'aal laga keenay.
Shaqaalaha Jabuuti oo codsanaya urur shaqaale oo midaysan
Labada urur shaqaale ee waddanka ugu wayn, Ururka Guud ee Shaqaalaha Jabuuti iyo Midawga Shaqaalaha Jabuuti, waa in ay gacmaha is qabsadaan si ay ugu ololeeyaan xuquuqda shaqaalaha, shaqaalaha ayaa sidaas leh.
Marnaanta halbeeg tacliineed oo gobolka ah ayaa hor istaagtey koboca ganacsiga Bariga Afrika
Halbeeg tacliineed oo la isla oggolyahay ayaa muwaaddiniinta iyo Shirkadaha Bariga Afrika u oggolaan doonta in ay xudduudaha isaga tallaabaan si ay u raadsadaan shaqooyin iyo fursado, sida ay saamilaydu qabaan.
Mas'uuliyiinta iyo muwaaddiniinta Kenya oo isku khilaafsan horumarka Yoolka 2030-ka
Kenya ayaa horumar yar ka gaartey dhaqan galinta qorshaha horumarinta Yoolka 2030-ka, sida ay qabaan dadka wax dhaleeceeya, balse mas'uuliyiinta la socda yoolka ayaa sheegaya in dalka uu ku tallaabsanayo guullo la taaban karo.
Hababka ay macquulka tahay in lagu xaqiijiyo soo kabsashada dhaqaalaha Soomaaliya
Xukuumadda federaalka waa in ay maal galiso fikrado cusub si ay meesha uga saarto dhibaatooyinka ganacsiga si dhaqaalaha Soomaaliya loogu hayo waddada korriinada.
Tansaaniya oo canshuur-qaadidda ku balaadhinaysa rasiidka elektarooniga ah
Bisha soo socota, ayaa ganacsato badan laga doonayaa in ay bilaabaan bixinta rasiidyada elektarooniga ah ee diiwaan-galiya canshuurta si loo xaqiijiyo in xukuumaddu hesho tix-raac sugan oo muujinaya lacagta ka soo gasha iibka.
Tansaaniya oo isku diyaarisay in ay noqoto hoggaanka wax soo saarka macdanta yuraaniyamka
Tansaaniya ayaa raadineysa lacag ku aadan mustaqbalka wabiga macdanta yuraaniyamka ee Mkuju taas oo la sheegay in ay ka koobnaan doonto ugu yaraan 36,000 oo tan oo ah walxo sare oo istaraatiiji ah iyo shucaac ah.
Inta badan dadka reer Jabuuti ayaa sabool ah iyadoo ay jiraan guullo dhaqaale oo qaran
Xukuumadda ayaa u baahan in ay wax badan ka qabato sidii loo caawin lahaa dalka uu dadkiisu faqrigu ka muuqdo, sida ay qabaan indha indheeyayaasha iyo dhaq dhaqaaqayaasha.
Dib u dhacyo hareeyay barnaamijka kabista beeraha Kenya
Barnaamijka ay dowladdu waddo ee lagu kabayo miraha iyo qiimaha bacriminta, ayaa beeralayda Kenya waxa ay badbaadinayaan kumannaan shilin, balse shixnadda oo dib u dhacday ayaa halis galisay dalagga sanadkan.
Suuqa cusub ee lagu kala gato saamiyada ee Nairobi oo wali u baahan in uu soo jiito shirkadaha yar yar iyo kuwa meel dhaxaadka ah
Suuqa lagu kala gato saamiyada ee Kenya ayaa furay meel ganacsi oo cusub oo loogu tala galay shirkadaha yar yar iyo meel dhaxaadka ah, laakiinse wali hal shirkadna ganacsigaas ma aysan bilaabin.
Kaalimaha shidaalka ee Muqdisho oo darawallada u baddalay jeerigaanada
Maamulka gobolka Baandir ayaa shatiyadii siiyay ganacsato si ay dib ugu habeeyaan una furaan siddeed kaalimo shidaal ah oo laga furayo caasimadda Soomaaliya.
Somaliland oo samaynaysa kayd biyo ah si ay u fududayso biyo yaraanta
Dawlad goboleedka Somaliland ayaa dhisaysa kayd biyo ah si ay u kaydiso biyaha roobka, ayna u dhinto biya yarida haysata 80,000 oo qof oo daggan Hargaysa.
Maal gashatada reer Kenya oo waayay fursadaha oggolaanshaha shirkadaha magacooda lagu ganacsado
La'aanshaha aqoon ku saabsan hannaanka shirkadaha magacooda lagu ganacsado ayaa hoos u dhigaya kobaceeda Kenya, sida ay saamileeydu sheegeen.
Shardiga oggolaashana shaqo ee ku xiran muwaadiniinta Kenya, Uganda, Tansaaniya, Ruwanda iyo Burundi ayaa caqabad ku ah is dhex-galka suuqyada gobolka, sida ay sheegayaan saamilayda.
Hanaanka igmashada ee xukuumadda ayaa u fududeyn doona madaxda maxaliga ah in ay kala mudaan barnaamijyada ayna maal galiyaan mashaariic bulshadooda ka caawin gara in ay gaaraan isku-fillaasho dhaqaale.
Doolarka ku soo badanaya Soomaaliya oo kor u qaaday sicirka nolosha
Maadaama ay qurba joogtii Soomaaliya ku soo noqonayaan iyaga oo wata lacag qalaad, ayaa yaraanta lacagta shilinka ah ay u saamaxday ganacsatada in ay qiimaha sarifka lacagta ka dhigaan mid aan wanaagsaneyn.
Dadka daggan Mtwara oo xukuumadda Tansaaniya ku khilaafsan warshad gaas
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dowladdu ay qorshaynayso in ay gaaska ka dhoofiso Mtwara una wareejiso Dar es Salaam taa oo sidoo kale fursadaha shaqo iyo horumarkana ka fogaynaysa gobolka aan horumarsanayn.
Warshaddii Soomaaliya ugu horaysay ee waraaqaha oo Hargaysa laga furay
Warshadda ayaa waxaa ka shaqaynaya 50 qof waxayna soo saaraysaa 70,000 oo buugaag suuqa la gayn karo 16-kii saacba.
Abaarta oo ku kaliftay xoolo raacatada Wajeer inay dhagaxa nuuradda qodaan
Abaarta ka jirta Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa baabi'isay boqolaal xoolo dhaqata ah nolol maalmeedkoodii, kuwaasoo aan haysan siyaabo badan oo ay reerahooda wax ugu soo saaraan.
Adeegga cusub ee taleefannada gacanta ee M-Shwari oo u adeegi doona Kenyanka aan baananka laga caawin
Safaricom ayaa sheegtay in adeegeeda cusub ee taleefanka gacanta ee daymaha yaryar ee danyarta lagu siin doono ammaah ay ganacsatadaasi sida caadiga ah buuxin karin shuruudaha lagu qaato si markaa loogu maal-galiyo in ay bilaabaan ama ay sii horumariyaan ganacsigooda.
Ganacsiga dekadda Dar es Salaam ayaa kor u kacay kaddib markii Wasaaradda Gaadiidku ay shaqada ka xanibtay 16 mas'uul oo lagu eedeeyay in ay ganacsiga ka leexinayeen dekadda una leexinayeen shirkado khaas ah.
Maamulka Somaliland oo fududaynaya sharciyada ganacsiga
Maamul goboleedka ayaa ka shaqaynaya sidii uu u hormarin lahaa nidaamka kharashka badan ku baxo ee adag ee diwaan galinta ganacsiyada.
Kubadda cagta Tansaaniya oo caawinaad ka heshay Santuukha Dammaanadda Bulsho ee Qaranka
Sanduukha ayaa u qasdinaya in la badbaadiyo kooxda kubadda cagta qaranka, iyadoo la aasaasayo xarun lagu tababarayo cayaaryahannada yar yar, iyadoo isla markaana ay faa'ido ka kasbanayaan kuwa u qaaraama santuukha.
Dhoofinta xoolaha Soomaaliya oo waafaqaya heerka amniga ee caalamka
Iyada oo kaashanaysa maal-galiyayaal khaas ah, ayaa dawladda Soomaaliya xaqiijinaysaa in xoolaha loo dhoofiyo dibadda ay waafaqsanyihiin heerka amniga ee caalamka u dagsan, masuuliyiinta ayaa sidaas leh.
Shirkadaha Tagaasida oo shaqooyin ka abuuray Hargaysa, socdaalkana sahley
Afar shirkadood oo cusub oo kuwa tagaasida ah ayaa shaqo ka bilaabay Hargaysa lixdii bilood ee la soo dhaafey, taas oo ay dawladda hoose sheegtay in ay tilmaan u tahay horumarka gobolka.
49 sano kaddib markii ay xornimada qaadatey, ayaa Kenya wali ku dambaysaa dhinaca horumarka
Kenyanka ayaa leh dawladdu waa in ay dhistaa suuqyo dheeraad ah ayna sameeysaa barnaamijyo loogu talo galey in lagu socodsiiyo dhaqaalaha laguna awood-siiyo dhalinyarada.
Dhaqaalaha Gaarisa oo la jahawareersan weerarradii is xig-xigay ee dhawaan dhacay
Weerraradii xiriirka ahaa ee dhawaan dhacay ayaa burburiyay dhaqaalihii Gaarisa, hasa yeeshee hoggaamiyayaasha maxalliga ah ayaa leh arrimahan waaa laga soo kaban karaa haddii dadka degaanku ay iskaashi kala sameeyaan ciidamada ammaanka dagaalka lagaga soo horjeedo al-Shabaab.
Dayactirka wadooyinka Gaarisa oo dhamaad ku dhaw
Mashruucan oo ay ku baxayso 85 milyan oo shillin ayaa markiiba ka caawiyay milkiilayaasha ganacsiga ku leh wadooyinka laamiga la mariyay in ay furnaadaan xiliga ay roobka badan da'ayaan.
Dar es Salaam oo joojinaysa basaska khaaska ah ee la raaco
Dawladda ayaa joojinaysa basaska khaaska ah ee la raaco iyada oo door bidaysa nidaam tareen oo cusub, iyo nidaam basaska ah oo ay dawladdu maamusho, laakiin milkiilayaasha khaaska ah ayaa ka walwalsan is badalkan.
Dawladdu waa in ay soo saarto khidad muddo dheer ah oo lagu dhisayo kaydka tamarta qaranka laguna ilaalinayo is-bedbeddelka lacagta dalka si loo xoojiyo loona xasiliyo dhaqaalaha, dhaqaale yaqaanada ayaa sidaas leh.
Xarumaha cillaan-saarka oo ay haweenka Kenya ka helaan dakhli ay noloshooda ku maareeyaan
Iyadoo waagii hore loo arki jiray howlo ay qoysku guriga ku sameeystaan waqtiyada aan waxba la hayn, ayuu cillaan-saarka hadda waxa uu noqonayaa ganacsi ku bullaalaya Nairobi iyadoo dakhli faa'iido badan uu ka soo galo haweenka ka shaqeeya qurxinta.
Bangiga Horumarinta Afrika oo maal-gelinaya dhismaha waddooyinka Tansaaniya
Bangiga Horumarinta Afrika ayaa dhowaan kordhiyay maal-galinta horumarinta waddooyinka isku xira magaalooyinka Tansaaniya, iyo sidoo kale mashaariic Tansaaniya ku xiraya Kenya iyo meelo ka baxsan.
Isticmaalka caanaha geela oo dhiiri galiyay kobaca dhaqaalaha ee tuulooyinka Kenya
Isaga oo mar ahaa ganacsi xad yar, ayaa isticmaalka caanaha geelu uu kor u kacay, kaas oo xoolihii sabab uga dhigay dakhli wayn oo xoolalayda soo gala.
Maal-gashadeyaasha ayaa faa'idooyin badan ka helaya dhismaha guryaha ee Hargaysa iyo magaalooyin kale oo ku yaal waqooyiga Soomaaliya.
Beerista aqalka dhirta lagu koriyo oo kor u qaaday wax soo saarka beeraha Kenya
Beeralay badan oo Kenyan ah oo soo jireen ah ayaa u badalanaya abuurka aqalka dhirta lagu koriyo maadaama uu ka wax soo saar badan yahay qaabkoodii hore kana yar yahay dhinaca qarashka dayactirka, shaqaalaha ayaa sidaas leh.
Mukhaayadaha cuntada badda lagu iibiyo oo ku soo badanaya Muqdisho
Soo hagaagga ammaanka ayaa sahlay fursadna siiyay hoteelo iyo mukhaayado in laga furo xeebaha Muqdisho, taas oo dhalisay fursado xaga dalxiiska iyo shaqooyinka ah.
Sharciga wuxuu bankiyada gaarka loo leeyahay u oggolaanayaa inay Somaliland uga howlgalaan nidaamka bankiyada ee Islaamiga ah, kaas oo ay dadka saaxada ku jira ay leeyihiin waxay gobolka u horseedaysaa maalgalin.
Shirkado caalami ah oo Waqooyiga Soomaaliya ka bilaabaya sahmin shidaal
Shirkadda Genel Energy ayaa ka bilaabaysa Somaliland sahan shidaal, dhaq dhaqaaqaas oo keeni doona in shaqo loo abuuro dhalinyarada xilli aanay ka jirin aagga fursado badan.
Dooda baadhitaanka saliida iyo gaaska ee Tansaaniya oo meel adag maraysa
Sharci falanqeeyayaasha iyo ururada madaniga ah ayaa codsanaya sharciyo adag si ay u sahlanaanto in la maamulo dakhliga wayn ee dawlada ka soo galaya shidaalka.
Bangiga Aduunka oo doonaya in uu horumariyo qaybaha kalluumaysiga iyo ganacsi-abuurka ee Soomaliland
Ururka caalamiga ah ayaa siiyay waqooyiga Soomaaliya 14 milyan oo doolar si dib loogu habeeyo gobalka kaluumaysigiisa iyo ganacsiga maxalliga ah.
Shaqo joojinta adeega bulshada ayaa caqabad ku noqotay kororka dhaqaalaha Kenya
Shaqo joojinta qeybta shaqaalaha bulshada ayaa sii dhaawici karta hoos u dhaca hore u jiray ee dhaqaalaha, falenqeeyayaasha ayaa sidaas leh.
Soomaalida ku nool dibadda oo ku soo laabanaya Puntland si ay u maal gashadaan, xiriirkana usoo celiyaan
Iyada oo Ammaanka uu soo hagaagayo, ayaa Soomaalida dibadda ku nool ku soo laabanayaan dalka si ay u maal gashadaan, ayna bartaan hidaha iyo dhaqankooda.
Soo saar dalag badan oo yareeyay qiimaha sicir bararka ee Tansaaniya
Sicir yari ah dhinaca cuntada iyo quutul daruuriga asaasiga ah ayaa wax yar hoos u dhigay qiimaha sicir bararka Tansaaniya, laakiinse waddanku siyaabo uu horay ugu sii socon karo ayaa jirta, falanqeeyayaasha ayaa sidaas leh.
Hoos u dhaca xili roobaadka ayaa sababaya hoos u dhac xooggan oo ku yimid xoolihii loo dhoofinayay Khaliijka Carabta kahor Xajka.
Tansaaniyaanka oo soo dhaweeyay qorshaha lagu yaraynayo cidhiidhiga baabuurta ee Dar es Salaam
Dawladda ayaa fulinaysa qorshayaal wadooyinka lagu dhisayo, is-goysyada la dhinac mari karo, baabuurta yar yar ee rakaabka la badalo, tareen dadku ay raacaana la bilaabo -- si loo yareeyo zaxmadda caasimada.
Islii: tusaale xarumaha ganacsiga iyo kala duwanaashaha dhaqanka
Ganacsig bullaalaya ee Islii ayaa gadislayda iyo shirkada dhismaha ku dhaliyay in ay hannaankeeda ganacsi ka hirgaliyaan meelo kale.
Tansaaniya oo heshay amaah ay kula dagaalamayso guryo yarida
Hay'adda Wadaniga ee Guryaha oo ah mid ay dawladdu leedahay ayaa heshay amaah si ay ugu dhisto 15,000 oo guri, kuwaas oo inta badan la siinayo dadka dakhligoodu hooseeyo.
Somaliland oo casriyaynaysa maddaarada Hargaysa iyo Berbera
Mashruucan lagu dayac-tirayo labada maddaar oo ay ku kacayso 10-ka milyan ee doollar ayaa waxa uu Somaliland u soo jiidi doonaa duullimaadyo caalami ah oo dheeraad ah isla markaana waxa uu Somaliland la fal-galin doonaa dhaqaalaha gobolka.
Dhisme ka biloowday waddada isku xirta Hargaysa iyo Ina Guha
Waddada ayaa kor u qaadi doonta dhaqaalaha gobolka, waxayna fududeeyn doontaa isku socoda xoolaha, oo isagu aha laf-dhabarka dhaqaalaha Somaliland, sidaana waxa sheegay saraakiil iyo dhaqaaleyahanno.
Barlamaanka Tansaaniya oo ka doodaya miisaaniyadda qaranka
Qaar ka mida sharci-dajiyayaasha ayaa ku doodaya in miisaaniyadda cusub ay si waafi ah wax uga qaban karin baahida horumarineed iyo tan waxbarasho ee Tansaaniya.
Waddo tareen oo cusub oo Nairobi laga furayo bisha dambe
Wejiga hore ee mashruuca ayaa furmaya July, waxaanu isku xiri doonaa Syokimau iyo Degmada Dhexe ee Ganacsiga.
Ganacsiga yaryar ee Muqdisho oo ah calaamad muujinaysa horumarka dhaqaalaha iyo ammaanka
Aaladaha dharka lagu dhaqo iyo adeegyo kale ayaa si xawli ah uga furmaya Muqdisho iyada oo xaaladaha ammaanka iyo horumarinta kaabayaashu ay soo badanayaan.
Tansaaniya oo dhallinta ku xoojinnaysa tababbarro xirfadeed
Dedaallada ay Tansaaniya ku doonayso in ay wax ka qabato shaqo la’aanta iyadoo la samaynayo macaahid tababbarro xirfadeed ayaa wax ka taray dhimidda shaqo la’aanta dalka ka jirta.
Duullaanka ay wadaan duur-joogta Kenya waxa uu caqabad ku yahay soo saaridda cunnada iyo dhaqaalaha
Beerallayda Kenya ayaa isku dayaya sidii ay dallaggooda uga ilaalin lahaayeen xayaawaanka burburiya, halka ay Adeegga Duur-joogta Kenyana ay ka fakarayaan xal lagu badbaadin karo dadka iyo duur-joogtaba
Cudur halis ku haya dalagga galleey ee Kenya
Cudurka ku dhaca galleeyda oo halis ah ayaa saameeyay in ka badan 300,000 oo beeralleey ah, isla markaana khatar ku ah sugnaanta ammaanka cunnada dalka.
Tansaaniya oo sameeynaysa cinwaannada waddooyinka
Dhaqan-galinta canaawiinta waddooyinka waxa ay dadka degaanka u sahli doontaa in ay si fudud u helaan goobaha ay ku yaalliin xarumaha ganacsi iyo in ay guryahooda ku helaan dhabmaallada – dhanka kalena waxa ay xukuumadda u sahli doontaa in ay ballaariso canshuur ururinta.
Somaliland oo soo dhaweynaysa furitaanka warshad cusub oo weelaysa sharaabka
Soo saaridda maxalliga ah ee cabitaannada fudud ayaa wax ka geysanaysa sare u kicidda dhaqaalaha isla markaana soo saaraysa shaqaale xirfad leh oo soo jiidan doona maalgelinno dheeraad ah, ayay leeyihiin saraakiisha iyo dhaqaaleyahannada.
Qiimaha shidaalka ee kacaya oo saamayn ku yeeshay dhaqaalaha Somaliland
Shirkadaha shidaalka ayaa doonaya habab kale oo ay ku daabbulaan kuna soo dejiyaan shidaalka, kuwa ku shaqeeya basaskuna waxay sheegayaan in ay lagama maarmaan tahay in ay kordhiyaan qiimaha bas-raaca, ama ay joojiyaan wadidda basaska.
Jidweynaha Thika ku xira Nairobi oo dhamaasho ku dhaw .
Iyadoo ay dhamaatay 90% ka mid ah jidweynaha ayaa saamaynaha togan ee ay taasi dhaqaalaha ku yeelan doonto ay haatanba soo ifbaxayo
Qiimaha sare ee korantada, liidashada kaabayaasha gaadiidka iyo dhibaatooyin kale ayaa shirkadaha qaar ku khasbay in ay dalka ka tagaan, laakiin kuwo kale ayaa ku dedaalaya in ay arrintaa wax ka beddelaan.
Tanzania oo kordhinaysa biyaha laga helo Daaru Salaam
Mashruuca cusubi wuxuu kordhin doonaa soo saarka biyaha la cabi karo isagoo sidoo kalena taageero ka gaysan doona biyo siinta dadwaynaha ku dhaqan Daaru Salaam ilaa sannadka 2025-ka, sida ay tilmaameen qaar ka mid ah qiyaasaha.
Bulshada Bariga Afrika oo wanaajisay xaaladda ay ganacsatadu ku shaqayn karaan
Dhaqan-galinta isbaddallada lagu sameeyay qawaaniita, wuxuu dalalka ku yaala Bariga Afrika u sahlay inay diiwaan-gashadaan ganacsigooda sidoo kalena xudduudaha isku waydaarsadaan badeecada.
Gaarisa oo ka faa’iidaysanaysa korodhka ganacsiga guryaha
Ammaanka ka soo reeyay Waqooyi-Bari Kenya ayaa keenaya dalab aan hore loo arkin oo dhulka lagu rabo, laakiin maal-gashadayaashu waa inay ka digtoonaadaan khayaannada, sida ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo gorfeeyayaali.
Kenya oo hoggaanka u qabatay tiknoolajiyadda xawilaadda lacagta ee mobile-ka
Adeegga taleefanka gacata (mobile-ka) ayaa dadka reer Kenya u oggolaaday in ay lacago xawili karaan isla markaana bixin karaan khidmadda adeegyada ay isticmaalaan.
Falanqeeyayaasha: helitaanka Kenya laga helay shidaalku waxay wax ka beddeli kartaa dhaqaalaha dalka
Dhaqaaleyanno ayaa waxay soo jeedinayaan in la sameeyo qorshe siyaasadeed si loo hubiyo qaybaha dhaqaaluhu ka kooban yahay ee inta badan hada shaqada siiya dadka reer Kenya in ayna dhibaato ka soo gaarin haddii dhoofinta shidaalku uu bilaabmo.
Sicir-bararka shilinka iyo ascaarta kacday oo adkeeyay nolol-maalmeedka Soomaalida
Qiimaha shilinka Soomaaliga ayaa kor u kacay bilihii la soo dhaafay, hase yeeshee muwaaddiniinta ayaa sheegaya in ayan wax is baddal ah ka dareemin sicirka badeecada iyo adeegyada.
Kenya oo xasilisay koboc dhaqaale, laakiin uu sii kacayo sicir-bararku
Macaamiisha ayaa leh qiimaha sare ee nolasha ayaa naga hortaagan in aan dareenno horumarka uu sameeyay dhaqaalaha Kenya.
Qiimaha korontada oo dhaawacay dhaqaalaha Tansaaniya
Ascaarta sare loo qaaday iyo gabaabsiga korontada ayaa ka dhigay nolasha mid sii adkaata, hayeeshee dawladda ayaa leh wax baannu ka qabanaynaa mushkiladdan.
Dekedda cusubi waxay qayb ka tahay mashruuc ballaaran oo ay ku jiraan dhuumo saliideed, jidad dhaadheer, gegiyo diyaaradeed iyo waddooyin tareen, waxaana la rajeynayaa in uu si muuqata u kobcin doono dhaqaalaha gobolka.
Wadahadallada dawladaha Bariga Afrika ay ka leeyihiin midaynta dhaqaalahooda oo socda
Wakiillo ka kala socda Bulshada Bariga Afrika ayaa kulan yeelanaya bilkasta si ay u jeexaan qorshe ku saabsan hab lacageed-middaysan, oo uu dhaqan-galkiisu ku aaddan tahay bisha November.